Cheap CNC agbanye igwe anaghị agba nchara factory na suppliers | Ouzhan
A na-agbakwunye ihe ndị bụ isi nke igwe anaghị agba nchara, chromium, nickel, na ụfọdụ ihe alloy dịka molybdenum, ọla kọpa, na nitrogen. Isi alloying mmewere na igwe anaghị agba nchara bụ Cr (chromium), na naanị mgbe Cr ọdịnaya ruru a ụfọdụ uru, nchara nwere corrosion eguzogide. Ya mere, igwe anaghị agba nchara n’ozuzu ya nwere opekata mpe 10.5% nke Cr (chromium).
Igwe anaghị agba nchara CNC mbịne nhazi-ahaziri nkenke nkenke igwe anaghị agba nchara mbịne akụkụ
Igwe anaghị agba nchara nwekwara ihe ndị dị ka Ni, Ti, Mn, N, Nb, Mo, Si na Cu. Igwe anaghị agba nchara cnc-atụgharị akụkụ bụ nnọọ ọtụtụ ma na ọtụtụ-eji nri, chemical, ụgbọelu na-ewu ụlọ. Usoro nhazi bụ akụkụ nke nhazi usoro. Nhazi lathe na-ejikarị ngwa ntụgharị eme ihe iji gbanwee ihe eji arụ ọrụ. A ga-ejikwa ihe ndozi, ream, reamer, taps, dies na knurling ngwaọrụ na lathe maka nhazi kwekọrọ. A na-ejikarị lathes eme ihe maka ịkpụzi igwe, diski, aka uwe na ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ na gburugburu. Ha bụ ndị kasị ọtụtụ ebe ada ụdị nke igwe ngwá ọrụ nhazi na ígwè ọrụ n'ichepụta na idozi ụlọ ọrụ.
Uru nke Ouzhan anaghị agba nchara tụgharịrị akụkụ
- Green na nchedo gburugburu ebe obibi, igwe anaghị ata nchara nwere ike ịbụ 100% megharịrị emegharị, agaghị ebute mmetọ gburugburu ebe obibi, ma na-enye aka maka mmepe na-adigide; mkpofu ahihia nwere oke uru nke aku na uba.
- Njirimara chemical: Nguzogide kemịkal na nkwụsị nke electrochemical bụ ihe kachasị mma n'etiti ihe nchara, nke abụọ bụ titanium alloys.
- Njirimara anụ ahụ: nguzogide okpomọkụ, nguzogide okpomọkụ dị elu, iguzogide okpomọkụ dị ala na ọbụna nkwụsị nke okpomọkụ-obere.
- Njirimara mekaniki: Dịka ụdị igwe anaghị agba nchara, igwe ọrụ dị iche. Igwe anaghị agba nchara Martensitic nwere nnukwu ike na nkụja, ma dabara adaba maka nrụpụta nsonaazụ na-eguzogide ọgwụ nke chọrọ nnukwu ike na akwa mgbochi na-eyi akwa, dị ka hydraulic turbine shafts na igwe anaghị ata nchara. Knife, igwe anaghị agba nchara biarin, wdg, austenitic anaghị agba nchara nwere ezigbo plasticity, ọ bụghị elu ike ma kacha mma corrosion eguzogide n'etiti igwe anaghị agba nchara. Okwesiri maka oge nke choro iguzogide corrosion ma ihe di ala, dika osisi ogwu na osisi fatịlaịza. Ngwa akụrụngwa nke sulphuric acid na ndị na-emepụta hydrochloric acid, wdg, n'ezie, enwere ike iji ya na ụlọ ọrụ ndị agha dị ka okpuru mmiri. Ferritic anaghị agba nchara nwere agafeghị oke n'ibu Njirimara na ala ike, ma ọ bụ na-eguzogide ọgwụ ọxịdashọn na adabara dị iche iche ulo oru oku akụkụ.
- Usoro arụmọrụ: Austenitic anaghị agba nchara nwere arụmọrụ kacha mma. N'ihi plastik ya dị mma, enwere ike ịhazi ya n'ime efere dị iche iche, ọkpọkọ na profaịlụ ndị ọzọ, nke kwesịrị ekwesị maka nhazi nrụgide. Igwe anaghị agba nchara Martensitic nwere arụ ọrụ adịghị mma n'ihi oke ike.
OEM ahaziri igwe anaghị agba nchara mbịne ọrụ-China Shanghai CNC igwe anaghị agba nchara mbịne akụkụ emeputa
Ouzhan bụ onye nrụpụta na - agbakwunye ụlọ ọrụ na azụmaahịa, na - enye ọrụ ndozi ntụgharị na igwe nhazi igwe. Dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, CNC ziri ezi na-atụgharị akụkụ igwe anaghị agba nchara nwere ike ịhazi ya. A na-arụpụta akụkụ igwe ndị a site na iji akụrụngwa kachasị mma, nke a na-enweta site na ndị na-ebubata ngwa ahịa a ma ama. Anyị ike na ọkachamara oru otu na oru oma management na ime ihe na usoro nwere ike hụ na zuru okè n'ichepụta nke igwe anaghị agba nchara mbịne igwe akụkụ. Ke adianade do, CNC-tụgharịa igwe anaghị agba nchara ngwaahịa nyere nditịm izute àgwà ụkpụrụ na ike ga-eji dị iche iche ulo oru ngwa. Na anyị nwere ike inye mpi ọrụ maka igwe anaghị agba nchara CNC mbịne ngwaahịa na anyị kpọrọ ahịa.
Ngwa mpaghara nke igwe anaghị agba nchara na-atụgharị akụkụ:
Industrylọ ọrụ ugbo ala, ụgbọ ala, bọs, ụgbọ oloko, ụgbọ ala ụgbọ oloko na akụkụ ndị ọzọ.
Ise nwere ikike maka igwe anaghị agba nchara, gụnyere ụlọ ọrụ mmiri, ụlọ ọrụ ihe owuwu, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ, ụlọ ọrụ nchekwa gburugburu ebe obibi, na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Uru nke igwe anaghị agba nchara na-atụgharị ọrụ
- All nkenke CNC tụgharịrị igwe anaghị agba nchara ngwaahịa bụ isiokwu siri ike mma nnyocha.
- OEM awara awara ọrụ nwere ike ijide n'aka na ị nwetara ngwaahịa ndị achọrọ, kwado DDP, CIF, FOB na usoro ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ iji hụ na ndị ahịa nwere ike ịnata ngwongwo ahụ n'enweghị nsogbu.
- Dị ka Eserese ma ọ bụ n'omume Nlụpụta nkenke igwe anaghị agba nchara mbịne akụkụ.
Nke gara aga: Nkedo aluminum alloy anwụ mgbatị
Osote: Omenala Hot Extrusion esorowo Parts
Ahaziri electroplated ọla mbịne akụkụ pr ...
Ahaziri n'ibu carbon ígwè mbịne akụkụ ...